Fanehoana mivantana ny endriky ny Ray Izy
"Izy koa no famirapiratan'ny voninahiny sy endriky ny tenany indrindra ary mihazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny; ary rehefa nanao fanadiovana hahafaka ny fahotana Izy, dia nipetraka teo amin'ny tanana ankavanan 'ny Lehibe any amin'ny avo" - Heb. 1:3
Iza moa i Kristy? Izy no ilay Zanaka lahitokan'ilay Andriamanitra velona. Raha ho an'ny Ray dia Izy no teny izay maneho ny eritreriny, tahaka ny hoe eritreritra natao nisy feony. I Kristy no tenin'Andriamanitra. Hoy i Kristy tamin'i Filipo: "Izay nahita Ahy dia nahita ny Ray". Ny teniny dia akon'ny tenin'Andriamanitra. I Kristy dia naneho ny toetr'Andriamanitra sy ny famirapiratan'ny voninahiny ary fanehoana mivantana ny endriny. — YI, 28 Jona 1894
Amin'ny maha-Persona Azy dia naneho ny Tenany tao amin'ny Zanany Andriamanitra. I Jesôsy, ilay, famirapiratan'ny voninahitr' Andriamanitra, sy "endriky ny tenany" - Heb. 1:3, dia nanana endrik' olombelona raha niaina teto an-tany. Amin'ny maha-Mpamonjy ny isam-batan'olona Azy no nahatongavany teto an-tany. Amin'ny maha-Mpanavotra ny isam-batan'olona Azy no niakarany any an-danitra. Amin'ny maha-Mpanavotra ny isam-batan'olona Azy no hanaovany fanelanelanana any amin' ny fitsa- ran'ny lanitra. Eo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra Izy no manao asa fanelanelanana ho antsika, dia Ilay "Anankiray tahaka ny Zanak'olona" - Apok. 1:13.
Nosaronan'i Kristy, ilay Fahazavan'izao tontolo izao, ny famirapiratan'ny voninahitra maha-Andriamanitra Azy, ka tonga niara-nonina tamin'ny olona, mba hahafahan'ny olona hifankazatra amin'ny Mpahary kanefa tsy ho levona (...) Tonga i Kristy mba hanambara amin'ny olombelona izay tian'Andriamanitra ho fantatr'izy ireo. Mahita ny asan'ny tanan'Andriamanitra isika eny amin'ny lanitra ambony, eto an-tany, ary ao amin'ireo rano midadasiky ny ranomasimbe. Ny zavaboary rehetra dia samy mitory ny heriny sy ny fahendreny ary ny fitiavany. Kanefa na ny kintana na ny ranomasina (...) dia tsy afaka hampahafantatra antsika ny toetr'Andriamanitra toy izay anehoan'i Kristy Azy. —TFC 8:265 Naneho ny toetr'Andriamanitra Izy, ka nangoraka sy niombom-po ary nihevitra mandrakariva ny hafa, ary nanolo-tena mandrakariva hanompo an'Andriamanitra sy ny olona (...) Antsoina ireo mpanara-dia an'Andriamanitra mba hanahaka ny ohatra nasehon'i Jesôsy tamin'ny fiainany teto an-tany. Amin'ny alalan'ny heriny no iantsoina antsika mba hiaina ny fiainana madio sy mendrika izay niainan'ny Mpamonjy. — TFC 8:286,289.